ခွေးတစ်ကောင်ကအရာအားလုံးကိုကိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ Dogs World
တစ်နေ့လုံးတစ်ခုခုလုပ်ရင်ခွေးကလေးကကိုက်တယ်။ သူတို့ကအရာအားလုံးကိုက်! ဒီဟာကသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့၊ စူးစမ်းဖို့နည်းလမ်းပါ။ သူ၌ငါတို့ကဲ့သို့လက်မရှိသောကြောင့်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသူအသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ နှင့်, သူ့လူ့မိသားစုကအမြဲမကြိုက်ဘူး။
ခွေးတစ်ကောင်ကအရာအားလုံးကိုကိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကောင်းပြီ၊ အမဲသားကိုသိပ်ကိုက်မခံနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ငါအားလုံးကိုအောက်မှာရှင်းပြပါ့မယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်မရှိဘူး သူတို့အိမ်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သူတို့၏ပါးစပ်ကိုသုံးပါ ငါတို့လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ထိတွေ့ခြင်းခံစားချက်ကို အသုံးချ၍ သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ခွေးများ အမြဲတမ်းသားများဖြင့်အစားထိုးရန်လိုသည့်ကလေးသွားတိုက်ပါ။ ၎င်းကဲ့သို့သောလူသားကလေးများကဲ့သို့ပင်သူသည်အဆင်မပြေမှုကိုခံစားရသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့သက်သာရာရစေရန်၎င်းတို့သည်နူးညံ့ကြသောကြောင့်သူတို့ကိုအသားတင်တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ကစားစရာများကိုဝါးလျှင်ပိုဆိုးသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ငြင်းလို့မရပါဘူး ခွေးတစ်ကောင်လည်းကိုက်လို့ရတယ်၊ အကြောင်းကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုရယ်ပြီးပြီ၊ ပြီးတော့ကိုက်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲတွင်ရယ်စရာဖြစ်နေသည်။ မူအရတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး အဲဒါကိုငါတို့ထိန်းချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်.
3 ပတ်အရွယ်အထိ, yeah။ သူအိပ်နေချိန်လောက်အရေးကြီးတယ်၊ သူ့ကိုကိုက်ရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်နူးညံ့သောပါးစပ်ကိုတီထွင်ရန်မခက်ခဲသောကြောင့်သူမနာကျင်ဘဲကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ ဒါကသူ့ကိုအရာအားလုံးကိုကိုက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ မရရှိလျှင်ဝါးစားသည့်ကစားစရာများသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ယခု၎င်းသည်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အကျွံပျက်စီးခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်လအနည်းငယ်အတွင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမှတ်သားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့် သူသည် (၃) ပတ်ကျော်နေသမျှကာလပတ်လုံး - သူအိမ်သို့ပြန်လာရန်သူမကိုက်နိုင်ကြောင်းနားလည်စေရန်ပထမဆုံး နေ့မှစ၍ လိုအပ်သည်.
လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးကလေးကိုကိုက်ရန်ခွင့်ပြုပါက၎င်းသည်အသက်ကြီးသောအခါ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများဖြစ်စေနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ။
သူကငါတို့ကိုကိုက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုက်တော့မယ်ဆိုတာသိရင်ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကိုသဘောပေါက်နားလည်မှုမပါဘဲလုပ်မိရင် "ခိုင်မာတဲ့" မဟုတ်ဘူး "လို့ပြောပေမယ့်အော်ပြီးမပြောဘဲ ၁ မိနစ်လောက်သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ။
နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုသူကဝါးစားနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကို - ဒါမှမဟုတ်တခြားကစားစရာတွေကိုပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသူနဲ့အတူခဏကစားဖို့အခွင့်အရေးယူပြီးသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေမှာပါ။
အိမ်တွင်ကလေးများရှိပါက၎င်းတို့သည်ခွေးကလေးကိုကိုက်။ မကစားနိုင်ကြောင်းသူတို့ကိုပြောရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းအား၎င်းတို့အားအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။
နောက်ထပ်သိထားသင့်သည်မှာ furry ကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုပါ။ ငါတို့လုပ်ရင်ပိုခက်လိမ့်မယ်၊ ငါတို့မလိုချင်တဲ့အရာပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ခွေးတစ်ကောင်ကကိုက်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ